Izindlu zaseShumbuk 2 BHK Apartment B, Gangtok
Amakhaya eShumbuk- Ukubonelela ngendlu enamagumbi amabini okulala anamhlanje, embindini wedolophu yinkcazo yobunewunewu kunye nentuthuzelo. Indawo ibonelela ngobumelwane obuhle, indawo yentengiso ekufutshane kwaye inika imvakalelo yendlela yokuphila yasekhaya.
Izindlu zaseShumbuk zibonelela ngamagumbi ahlukeneyo ngokweemfuno zeendwendwe. Ineendidi ezintathu ezahlukeneyo zamagumbi- amagumbi okulala amathathu, amagumbi okulala amabini kunye negumbi le studio elinamagumbi okuhlambela ancanyathiselwe, indawo yokuhlala kunye nekhitshi kwigumbi ngalinye.
Ukufika kwindawo yam- Njengoko usuka eSiliguri, yehla eTadong, eGairigaon, eGangtok. Uya kufumana indlela ekhokelela ngasekhohlo ukusuka kuhola wendlela ojikayo. Indlela ibizwa ngokuba yiNdlela yoKhuselo. Thatha indlela ukuya kwindawo. Kukho ibhodi yemiqondiso ngaphandle ethi "Shumbuk Homes" yindawo oya kuyo.
Igumbi- Igumbi lokulala linebhedi ephindwe kabini, iisofa, iTV, iitafile zekofu, iitafile ezisecaleni, iwardrobe kunye negumbi lokuhlambela elincanyathiselwe. Igumbi lokuhlambela linesitya sokuhlambela, i-commode kunye nendawo yeshawari enegiza.